Cabdi Xaashi oo markale loo doortay Sanoter Aqalka Sare – WARSOOR
MUQDISHO – (WARSOOR) – Xarunta Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho waxaa ka socota doorashada Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi, waxaana goordhow la doortay Sanoterkii ugu horeeyay.
Kursiga koowaad ee kuraasta Aqalka Sare Gobolada Waqooyi ayaa waxaa ku tartami lahaa Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo Saciid Cumar Xuseen, balse waxaa kusoo baxay Cabdi Xaashi markii uu tanaasulay Saciid Cumar Xuseen.
Sanoter Cabdi Xaashi ayaa waxaa uu helay 44 cod oo gacan taag ah, waxaana ka aamusay labo xubnood.
Goordhow ayaa waxaa la guda geli doonaa doorashada kursiga labaad Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi.
Lix kamid ah kuraasta Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi oo la doortay